Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! » Itshizi entsha yasimahla yobisi: iMicroalgae yokuqala esekwe
I-Sophie's BioNutrients, inkampani yeteknoloji yemveliso yokutya yasezidolophini ezinzileyo, kunye neziko le-Ingredion Idea Labs® eSingapore, ibambisene ukuvelisa itshizi yayo yokuqala esekwe kwi-microalgae, eyenziwe kubisi lwe-Sophie's BioNutrients olungenalo ubisi lwe-microalgae. Nge vegan, iinketho zobisi ezingenazo iitshizi ekunyukeni kwempendulo kwiimfuno zabathengi ezikhulayo zezinye izinto ezisekelwe kwizityalo, le cheese engenazo zobisi lulongezelelo olulindelekileyo.
Le innovation samasi iqhayisa iprofayili umami kunye tangy incasa, ukulinganisa itshizi Cheddar yendalo kwaye inganqunyulwa ibhodi samasi, inyibilike kwi toastie, slotted kwi sandwich, okanye slathered phezu crackers okanye isonka njengoko isityebi kunye gooey ukusasazeka.
Nantoni na yobisi enokuyenza, i-microalgae inokwenza i-Cheddar
Iqela likaSophie's BioNutrients lisebenzisana neqela leengcaphephe zobuchwephesha e-Ingredion ukwenza isonka samasi esilungele imifuno. Ukuphuhliswa kusetyenziswa umgubo weprotheyini ye-microalgae, ifumaneka njengeentlobo ezimbini zeemveliso - i-semi-hard microalgae yobisi-free cheese kunye ne-milk-free cheese spread.
I-ounce enye ye-semi-hard microalgae cheese inika kabini isibonelelo semihla ngemihla se-B12. Iphinde ivunwe ngokuzinzileyo - akukho nkomo yenzakaliswayo ngexesha lenkqubo - kwaye inomlinganiselo ophantsi wekhabhoni.
"I-Microalgae yenye yezona zinto zityebileyo kunye nemithombo ye-ductile emhlabeni. Namhlanje sibonise enye inkalo yamathuba angenamkhawulo anokuthi anikwe le superfood - imveliso yobisi kunye ne-lactose-free enye indawo yesonka samasi, ngenxa ye-microalgae, inikezela ngomxholo weprotheyini ephezulu kuneendlela ezininzi ezikhoyo ezingenanto yobisi. Sichulumancile ngokumangalisayo kolu phuhliso lokutya okungekho mzimba kunye nethemba lokutya okubandakanya ngakumbi, ”utshilo u-Eugene Wang, uMseki-Msebenzi kunye ne-CEO ye-Sophie's BioNutrients.
U-Ai Tsing Tan, uMlawuli we-Innovation e-Ingredion naye wabelane, "Njengoko sisungula ukukhawulelana neemfuno eziguqukayo zabathengi, kubalulekile ukugxila kwiimpawu ezibalulekileyo ekudaleni imveliso ekhethwa ngumthengi. Indlela yethu yesonka samasi engenabisi kukuyiphuhlisa ngokusondeleyo kangangoko kunokwenzeka kwisonka samasi kuzo zombini incasa kunye noburhabaxa. Abathengi banokukonwabela ukutya kwesonka samasi esinencasa, okwaziwayo kunye nokunqwenelekayo. ”
Ukusebenzela ukudala ikamva lokutya elizinzileyo
Olu tshintsho lwamva nje lusekwe ngokuchasene nomva wemfuno eyomeleleyo yabathengi kwiimveliso zobisi ezisekelwe kwizityalo kwihlabathi liphela. Ukonyuka kolwazi ngeemeko zokunganyamezeli kwe-lactose kuye kwaba yinto ephambili ekuqhubeni imarike.
Ngokutsho kwefemu yophando lwemarike yamazwe ngamazwe yoPhando kunye neeMarike, imakethi yeshizi yevegan yehlabathi ixabisa i-1.2 yeebhiliyoni zeedola ngo-2019 kwaye kuqikelelwa ukuba iya kufikelela kwi-4.42 yeebhiliyoni zeedola ngo-2027, isanda ngesantya sokukhula sonyaka (CAGR) se-15.5% ukusuka ngo-2021 ukuya. 2027.
I-Sophie's Bionutrients ivelisa umgubo wealgae ongathathi hlangothi-ongangxengwanga olinywa ngokwendalo kwi-microalgae eneseli enye kwaye uvunwe ngeentsuku ezintathu kwindawo ekhuselweyo.
Iintlobo ze-microalgae ezisetyenziswa yi-Sophie's BioNutrients yi-US GRAS kunye ne-European Food Safety Authority (EFSA) evunyiweyo ukuba isetyenziswe njengezithako zokutya okanye izongezo.
I-Ingredion idibanisa amandla abantu, indalo kunye netekhnoloji ukwenza bonke ubomi bube ngcono. U-Ingredion uzibophelele ekuphuculeni ukhuseleko lokutya ngokusebenzisa iindlela ezizinzileyo zokufumana imveliso kunye nokunikezelwa kwemveliso ephuculweyo ukuxhasa ukhuseleko lokutya, kubandakanya nokugxila kwezinye iiproteni. I-Ingredion ibonelela ngobuchule bokuhambisa iimveliso ezikhethwa ngabathengi ekudaleni okulandelayo nge-Bionutrients kaSophie.